About Us - Gaomi JinHe Birta Products Factory
Gaomi JinHe Birta Products Factory waxa uu ku yaalaa magaaladiisa ee Mo Yan, guusha ee Prize ee Nobel ee Suugaanta ee dunida - Gaomi City, Gobolka Shandong. Waa galbeed ee Qingdao (Qingdao Port) iyo bariga magaalada WeiFang. JiaoJi Railway iyo QingYin Expressway gudbaan Gaomi City la meel aad u fiican oo gaadiid ku haboon.
Shirkadda Our inta badan soo saartaa biraha dubay suunka blued, biraha dubista suunka rinjiga, suunka galvanized, Cabaynta suun iyo alaabooyinka kale ee biraha. Waxaan leenahay wax soo saarka sanadlaha ah ee 30,000 tons. Shirkadda Our haatan soo saaraha ah xirayaan biraha waaweyn ee Shandong.
Waxaan leenahay nidaam hubinta tayada kaamil ah oo waafaqsan heerarka caalamiga ah. Laga soo iibinta ee alaabta ceeriin, in dhammaan dhinacyada kala duwan ee wax soo saarka, si baakooyinka, bakhaaro iyo gaarsiinta, waxaannu nahay dad dadaalaya in ay ku tiirsadaan tayada iyo adeegga kaamil ah.
Waxaan nahay qeybiyaha loogu talagalay soo-saarka our ee biraha la dubayo suunka blued iyo rinjiga dubista suunka xirxirida by Shandong LaiWu Iron iyo Steel Group, warshad Xinjiang aan xuduud lahayn Steel tuuboyinka ee Shanghai Baoshan Steel Group, Panzhihua Iron iyo Steel Group Rebar Branch, South Korea Pohang Iron iyo Steel Group Yantai Pohang Plant. Waxyaabaha lagu dhoofiyo South Korea, Romania, Russia, South Africa iyo dalal kale. Waxyaabaha Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa warshadaha ee dhalooyinka, tuubooyin bir, rebar, gariiradda, non-ferrous iwm
Alaabta oo tayo leh Top iyo adeegga fasalka-koowaad tahay raacdada weligeed ah. Maamulka Integrity waa falsafada, qancinta macaamiisha waa rogo oo adeegeena.
Waxaan ku hanuunsanahay by mabda'a lacagta labada dhinac in ay ka hor kula abuurta, si loo abuuro qaab mustaqbalka.
Waxaan ku hormartay technology-soo-saarka, iyo dabagalka cusub ee alaabta. Isla mar ahaantaana, adeegga wanaagsan ayaa wanaajiyey sumcad wanaagsan. Waxaan aaminsan nahay in inta aad fahmi our wax soo saarka, waa in aad diyaar u tahay iskaashi aan noqon. Raadinta Weeraryahanka in aad baaritaan.